Monday September 04, 2017 - 22:08:02 in Maqaallo by Mr.Kalshaale Media
hogaamiye caynkee ah ayuu noqon doonaa markuu ku guulaysto doorashada ka dib? Waa su aalo u baahan in ummaddu is weydiiso oo ku mashquulsho ciddii ay u garan lahayd hogaanka dalka .
Haddaan la baraarugin oo laga war hayn aduunyada, somaliland sida aynu horumar u gaadhnaa waa tu aan dhacaynin , waxaynu u baahan nahay hoggaamiye leh aragti dheer oo dalka lexejeclo ka qaba. Uma baahnin hoggaamiye shaadhmadoobe ah oo dadku ka cararayaan oo marka foodku soo dhawaado iigu gura' yidhaahda, hadhow na murayaadaha ka dalacda, kaas oo kale bulshooy inoo ma cuntamo, marka aynu sida wanaagsan ka eegno.
W/Q : AQOONYAHAN CABDISHAKUUR SICIID CABDI